प्रेम विवाह बढे संगै बढ्यो सम्बन्ध बिच्छेद ! « News24 : Premium News Channel
प्रेम विवाह बढे संगै बढ्यो सम्बन्ध बिच्छेद !
विवाह जीवनमा एक पटक मात्र गरिन्छ भन्ने भनाई नेपाली समाजमा सद्धियौ देखि प्रचलनमा रहेको छ । विवाहमा पूरा गरिने विधि र मान्यताले सात जुनीसम्म सम्बन्ध कायम रहन्छ भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ । तर समयको गतिसंगै यस्ता भनाईमा पनि परिवर्तन आउने अवस्था आएको छ । नेपाली समाजामा वढ्दै गएको सम्वन्ध विच्छेदको प्रचलनले परम्परागत रुपमा रहेका मान्यतालाई प्रतिस्थापन मात्र गरेको छैन सामाजिक समस्याको रुपमा समेत देखिन थालेपछि समाज मूल्य मान्यताबाट चुक्दै जान थालेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली समाजमा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव वढ्दो क्रम छ । मानिसको दैनिकी होस वा विवाहवारी पश्चिमा संस्कृतिले प्रभाव पार्दै गएको छ । पश्चिमा सस्कृतिको अनुशरणले नेपाली समाजमा समस्या पनि देखिन थालेका छन । परम्परागत रुपमा नेपाली समाज कायम रहेको मागी विवाहको प्रचलनमा कमी आएको छ र प्रेम विवाह गर्ने हरुको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुदै गएको छ । पे्रम विवहामा वृद्धि हँुदै जाँदा सम्वन्ध विच्छेद गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । विगत केही वर्ष देखि लगातार रुपमा वर्षेनी सम्वन्ध विच्छेदका मुद्धा वढ्दै गएको र सम्वन्ध विच्छेद गर्नेमा ३० वर्ष भन्दा कम उमेरका युवा युवतीको संख्या अत्याधिक रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विशेषगरी १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा–युवती सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने गरेका छन् । सानो उमेरमा प्रेम विवाह गर्ने र उनीहरुबीच विभिन्न घरायसी समस्याले विवाद उत्पन्न भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने संस्कृतिको विकास हुदै जाँदा समाज परम्परागत मूल्य मान्यताबाट चुक्दै गएको छ । काठमाडौं जिल्लामा गत बर्ष दुई हजार ३ सय ९२ सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा ६ सय ८३ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । हिन्दू मान्यतामा आधारित शालिन नेपाली समाजका लागि यो एउटा विकृत पक्ष बनेर उभिदै छ ।